अटल बिहारी बाजपेयीको विगत
बिबिसी । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एउटा अस्पतालमा ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएका भारतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी दशकौँसम्म देशको राजनीतिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा रहेका थिए।
उनी हालको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका संस्थापकमध्येका एक नेता थिए।
सो हिन्दू दक्षिणपन्थी पार्टीभित्र उनी नरम नेताका रूपमा चिनिन्थे।
वाजपेयी सन् १९९६ को १६ मे मा पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर लोकसभामा बहुमत सावित गर्न नसकेपछि उनले ३१ मे मा नै राजीनामा दिनु परेको थियो।
सन् १९९८ को आमचुनावमा उनी नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए।
सत्ता सम्हालेको १३ महिनामा नै गठबन्धनको एक सदस्य दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार फेरि ढल्न पुगेको थियो।
सन् १९९९ मा उनी फेरि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उनलाई सर्वप्रिय कवि, कुशल वक्ता तथा समावेशी राजनीतिको पर्याय मानिन्थ्यो।
सन् १९२४ डिसेम्बरमा ग्वालियरको एउटा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनको शिक्षादिक्षा ग्वालियरको तत्कालीन भिक्टोरिया कलेज तथा कानपुरको डीएभी कलेजमा भएको थियो।
राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपश्चात् उनले पत्रकारिता पनि गरेका थिए।
एक प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये सन् १९९८ मा भारतले गरेको परमाणु बम परीक्षणलाई लिइन्छ।
त्यसपछि भारत एउटा परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित भयो।
त्योसँगै छिमेकी पाकिस्तानसँगको सो देशको द्वन्द्व झन् चर्कन सक्ने आशङ्का पनि चुलिएको थियो।
तर आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको परमाणुअस्त्र परीक्षणलगत्तै वाजपेयीले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिन विशेष प्रयास गरेका थिए।
उनले पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग शिखरवार्ता गर्न बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर सहरसम्मको यात्रा गरेका थिए।
उनले तिब्बतलाई चीनको अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्दै बेइजिङसँग दिल्लीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेका थिए र भारतीय अर्थतन्त्रमा चिनियाँ लगानी बढाउने कदम चालेका थिए।
उनको कार्यकालमा भएका अन्य महत्त्वपूर्ण घटनामा कारगिल युद्ध, काठमाण्डूबाट दिल्लीको लागि उडेको इन्डिएन एयरलाइन्स विमानको अपहरण, सन् २००१ मा भारतीय संसद्‌मा भएको आतङ्कवादी आक्रमण तथा सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिन्दू(मुस्लिम दङ्गालाई लिइन्छ।
सन् २००४ को निर्वाचनमा बीजेपी र उसका साझेदारहरूको गठबन्धन सोनिया गान्धीको कङ्ग्रेस पार्टीबाट पराजित भएका थिए।
सन् २००५ मा बाजपेयीले आफ्नो ४० वर्षे राजनीतिक जीवनबाट सन्न्यास लिने घोषणा गरेका थिए।
काठमाडौँ । चीनको केन्द्रीय सरकारले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि बन्द भएको तातोपानी नाका खुलेको छ । कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा खाद्
यस समयमा सही रूपमा बाँच्न सिकेनौं भने मनोसामाजिक रोगको शिकार भइन्छः डा. राई
मनोविज्ञ डा. सुमाया राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी पूर्व उपप्राध्यापक हुन् । उनले मनोविज्ञान विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेकी छिन् । हाल उनी लण्डनको ह्यारोमा बसोबास गर्दै र्आकी छिन् ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित एक जना नेपालीको अमेरिकामा मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नेपालीहरुको मृत्यु खबर बाहिर आएको छ । लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आइरहेका ४३ वर्षिय निमा तेम्बा शेर्पाको मृत्यु भएको छ ।